RASMI: Kabtanka joogtada ah ee kooxda Manchester United oo la magacaabay – Gool FM
(Manchester) 17 Jan 2020.Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa ku dhawaaqay kabtanka cusub joogtada ah ee Red devils.
Ole Gunnar Solskjær ayaa shaaca ka qaaday in Harry Maguire uu xiran doono calaamada kabtanka ee kooxda Manchester United, halka uu ka noqon lahaa Ashley Young.
Harry Maguire ayaa yimid kooxda Man United xagaagii lasoo dhaafay, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay naadiga Leicester City aduun lacageed dhan 80 milyan ginni.
Inkastoo Harry Maguire ku sugan yahay garoonka Old Trafford mudo dhan 6 bolood oo kaliya, haddana tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa u doortay inuu xirto calaamada kabtanimada ee Red devils halka uu ka xiran lahaa Ashley Young, kaasoo ku dhow inuu u dhaqaaqo naadiga Inter Milan inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bishan Janaayo.
Macalin Ole Gunnar Solskjær ayaa kasoo hor muuqday shir jaraa’id si uu kaga hadlo arrimo quseeya kooxdiisa Man United kahor kulanka ay Axada la ciyaari doonaan Liverpool wuxuuna yiri:
“Harry Maguire wuxuu xiran doonaa calaamada kabtanka ee kooxda Man United kulanka Liverpool, iyo xilliyada kale ee soo socda”.
“Maguire wuxuu leeyahay tayada hoggaamiyaha, shaqsiyadiisa garoonka dhexdiisa iyo banaankaba waxay ii xaqiijineysaa inuu hogaamiye wanaagsan noqon doono”.
“Harry Maguire wuxuu horey u xiran jiray caalamada kabtanimada, xaaladiisa wuxuu la mid yahay sida xiddigaha Ashley Young, De Gea iyo Marcus Rashford, haddana Maguire si joogto ah ayuu calaamada u xiran doonaa”.